Sayid Axmed Madoobe oo Booqday Daarta wardoonka Jubland [Sawiro]
Tuesday June 12, 2018 - 09:34:56 in Wararka by Super Admin
Madaxweynaha dawlad gobolleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta booqoshu ku tagay xarunta cusub ee loo dhisayo Nabadsugidda Jubbaland, garoonka diyaaraha ee Kismaayo iyo jiidda hore ee deegaanka Buulo-guduud iyo Baar-sanguuni.
Axmed Madoobe oo uu weheliyo taliyaha nabadsugidda Jubbaland mudane Khaalid ayaa soo kormeeray xarunta cusub ee loo dhisayo Nabadsugidda Jubbaland oo maraysa heer gabogabo ah taasi oo loo dhisay loona qalabayno qaab casri ah.
Sidoo kale madaxweyne Axmed Madoobe wuxuu socdaal kormeer ah ku tagay garoonka diyaaraha Kismaayo oo lagu wado balaarin iyo dib u casriyayn laguna soo kordhinaayo adeegyo cusub. Garoonka ayaa lagu bilaabay wajigii koobaad ee lagu balaarinayo ayadoo la raacayo naqshad cusub oo dhawaan la soo bandhigay.
Dhinaca kale Axmed Madoobe ayaa si kadis ah oo lama filaan ah u booqday jiida hore ciidamada Daraawiishta Jubbaland iyo kuwa SNA ay ku suganyihiin ayadoo maalintii shalay ahayd ay ciidamadu gacanta ku dhigeen deegaanka Baar-sanguuni oo dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo.
Axmed Madoobe ayaa dhiirigalin ugu tagay ciidamada isla mar ahaantaana kulan khaas ah kula qaatay jiidda hore saraakiisha ugu saraysa ciidanka. Dhaqdhaqaaq xoog leh ayaa laga dareemayaa deegaanka Baar-sanguuni waxaana gaalaabaxaya diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Maraykanka oo dhanka hawada iyo sahanka ka saacidaaya ciidamada daraawiishta Jubbaland. Dhaqdhaqaaqa ciidan ayaa ku soo aadaya ayadoo wabiga Jubba karkaarada jabsaday biyihii roobabka iyo fatahaadihiina ay wali biyahoodu dhulka waran yihiin.